Maj Gen Nathan,”Fursado Muhiim ah Ayaa Ka Banaan Soomaaliya” – Radio Daljir
Agoosto 21, 2017 9:32 b 0
Safiir ku xigeenka Safaaradda dowladda Uganda ee Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka banaanyihiin Fursado badan oo ganacsi sidaas darteedna laga doonaayo ganacsatadda waa weyn ee dalka Uganda in ay maalgashi ay ku sameystaan.
Maj Gen Nathan Mugisha ayaa sheegay in ciidamo badan oo ka socda dowladda Uganda ay ku sugan yihiin Soomaaliya ,islamarkaana qaarkood aysan helin adeegyadii ay u baahnaayeen.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in ay jiraan Ganacsato u dhalatay Uganda oo ganacsiyo yaryar ka sameystay meelaha ay jooggaan ciidamada AMISOM.
Maj Gen Nathan Mugisha, waxaa uu sidoo kale sheegay in Shirkaddaha Diyaaradaha ee dowladda Uganda laga doonaayo in ay ka shaqo bilaabaan Soomaaliya, Maadaama labada shacab ay dhibaato ku qabaan Safarada ah Kampala iyo Muqdisho.
” Waa Nasiib daro in aysan jirin diyaarad laga leeyahay Uganda oo Muqdisho ka shaqeysa, Waxaana u sheegaya Ganacsatadda Diyaaradaha Uganda in Fursad weyn ay ka banaantay Soomaaliya, Meeshii loo socon lahaa Saacaddo kooban Muqdisho iyo Kampaala, waxaa la sii maraya kenya taasi oo Caqabad ku ah socdaalka labada dhinac” ayuu yiri Maj Gen Nathan Mugisha.
Isagoo Wariyeyaasha la hadlaayay ayuu sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda Uganda ee ku sugan Soomaaliya ay sii waddi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.